Breaking News : स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल वि´रुद्ध अ´ख्तियारमा उ`जुरी…पूरा पढ्नुहोस् ।
काठमाडौं : मेडि´कल सा`मग्री ख`रिद गर्दा अनि`यमित`ता गरेको आ`रोपमा स्वा`स्थ्य तथा जन`संख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल वि`रुद्ध उ,जुरी ग,रिएको छ ।
विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले बुधबार अ`ख्तियार दु`रुपयोग अ`नुसन्धान आयोगमा उ´जुरी गरेको विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष मिलन पाण्डेले जा´नकारी दिए । प्रदेशसभा सदस्य पौडेलले बुधबार अ`ख्तियारको वेबसाइटमार्फत मन्त्री ढकालकाविरु`द्ध उ`जुरी दिएको पाण्डेले जा´नकारी दिए ।
अ´ख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने अन्य काममा व्यस्त भएकाले अनलाइमा उ`जुरी आए नआएको हेर्न नभ्याएको बताए । ‘अनलाइनमार्फत उ`जुरी प्राप्त भएपछि प्रे´षकलाई प्रा´प्त भएको जान,कारी सि´स्टमले नै दिन्छ।’ प्रवक्ता कोइरालाले भने अहिले हेर्न भ्या,एका छैनौं आयो आएन एकछिनपछि हेर्छौं ।
बजार द`रभन्दा धेरै म`हँगोमा मेडि´कल सा´मग्री ख`रिद गरी अ`नियमित`ता भएको देखिएको र सबत्र आ`लोचना हुँदासमेत जवाफ दिन आवश्यक नहरहेको भन्दै मन्त्री ढकाल पन्छिएको आ`रोप उ´जुरीमा लगाइएको छ ।
उ´जुरीमा लगाइएका आ´रोपहरु हेर्नुहोस् ।
१. तीन महिनाअघि नै स्वास्थ्य तथा ज`नसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारी गरेर खुलाएको टेन्डर रद्द गरेको,
२. बजार द`रभन्दा चार गु`णासम्म महँगो पर्ने गरी मेडिकल सामाग्री ख`रिद गरिएको,
३. ख´रिद कार्य गर्न आफू निकटका व्यापारीलाई रातारात सेटिङ मिलाएको, मेडि`कल सा`माग्री सप्लाईको अ`नुभव नै नभएको कम्पनीलाई तीन घन्टामै टे´न्डर दिलाएको,
४. वाणिज्य विभागमा द`र्ता नै नरहेको कम्पनीको कोटेशन स्वीकृ`त गरेको,
५. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सि`फारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा आ`लोचना भएका र्‍या`पिड टेस्टिङ किट सात करोड भन्दा बढीको लागतमा किनेको,
६. यस अघिका ठुला भ्र´ष्टाचार का´ण्डहरू (वाइड बढी घोटाला, ललितानिवास जग्गा प्र´करण, से´क्युरिटी प्रिन्टर ख`रिदमा ७० करोडको क`मिसन बार्गे`निङ, आदि) मा जस्तै अ`ख्तियार द´रुपयोग अनु´सन्धान आयोगको स्वतन्त्र छा`नबिनलाई प्र`भावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले यो का´ण्डमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको ब`चाउमा अभिव्यक्ति दिएको ।